WPS Office Beta ee LINUX. | Laga soo bilaabo Linux
WPS Office Beta ee LINUX.
marianogaudix | | La cusboonaysiiyay 02/04/2018 18:46 | Aplicaciones, GNU / Linux
Xafiiska WPS sidoo kale og sida Xafiiska KingSoft waa shirkad shiineys ah oo soosaarta qol xafiis leh jawi la mid ah kan MS Office. Xafiiska WPS waa bilaash laakiin waa ilo xiran. Shirkadda Shiinaha ayaa go'aansatay inay gasho GNU / Linux oo ay la socdaan xafiiskooda.
Ilaa hadda shirkaddu waxay bixisaa nooca BETA ah GNU / Linux oo leh qaab dhismeed 32-bit ah, oo waliba lagu socon karo GNU / Linux Iyadoo leh 64-bit naqshadaha, waxaa lagu heli karaa Shiinaha iyo Ingiriiska.
Aniga shakhsiyan xiisaha darteed ayaan u rakibay si aan u arko sida jawiga qolkani u egyahay Linux Mint 14 leh qaab dhismeed 64-bit ah. Waxaan idiinka tegayaa video aan soo galiyay Youtube, si aad u aragtaan deegaanka BETA ee Xafiiska WPS.
Soo Degso Xafiiska WPS
Ku rakib WPS Office Ubuntu ama Linux Mint oo leh qaab dhismeed 64-bit ah
Marka xirmada WPS Office la soo dejiyo, waxaan fureynaa boosteejada iyo booska.
maktabadahaani waxay noo oggolaan doonaan inaan ka wadno WPS Office gudaha Ubuntu, Linux Mint, Fedora y FurSuse leh qaab dhismeed 64-bit ah. Kadibna waxaan ku rakibnaa barnaamijka GDebi gacanta.
Ka beddel luqadda Shiinaha iyo Ingiriiska
Waxaan fureynaa xafiiska WPS waana xireynaa. Kadib waxaan fureynaa xarunta waxaanna qoreynaa:
Kadib jumlada soo socota:
Gabagabadii, waxaan u maleynayaa inay fiicantahay in la ogaado in GNU / Linux ay kusii xoogaysanayaan Aasiya. Xafiiska WPS waa ilo xiran, laakiin wali waa mustaqbal kale oo mustaqbalka ku wajahan adeegsadayaasha GNU / Linux.
Sidoo kale way fiicantahay in la arko tartan lagu hagaajinayo qolalka xafiisyada gudaha GNU / Linux. Dabcan dareenkeygu had iyo jeer wuxuu la joogi doonaa softiweer bilaash ah, taasi waa, LibreOffice, Calligra, AbiWord, iwm. Hagaag waxay ku siin karaan fikradahooda wax dhisaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » WPS Office Beta ee LINUX.
Hagaag, ma hubo inay u noqon karto tartan loogu talagalay qolalka xafiisyada jira ee Gnu / linux, maxaa yeelay taasi waxay ahayd inay caan ku noqoto dadka isticmaala, laakiin waxaa xiiso leh in la arko in shirkaduhu doonayaan inay ku dhiiradaan Gnu / linux.
Hagaag, ma ogi haddii taasi caan ka tahay hadalku u qalmo faallooyinka isticmaalka ... Haddii lagu isticmaalo Shiinaha waxaa jira dhowr milyan oo isticmaali doona ...
Waxaan ku tijaabiyay daaqadaha waana inaan dhahaa dhibaatada luuqada kadib, waa isku xirnaan run ah oo xafiiska ah 2010 (laakiin waxaad ku ridi kartaa badhannada qaabka 2003), waxayna u shaqeysaa mid la yaab leh, iswaafajinta docx, xlsx, iyo pptx aad u wanaagsan
Hadday ahaan laheyd Isbaanish ...
Barnaamijkani waa mid "caan ku ah" Android, markaa tani waxay noqon kartaa marinkaaga.
Uma maleynayo inay suuqa cuni doonto, laakiin waxaa laga yaabaa inay ku riixdo iyada oo LibreOffice aysan ku sii nasan
Waxaan ku dhajin doonaa iskuxirka LibreOffice 😀
Runtii ma fahmin kuwa adeegsada xafiiska libre
Ku soo jawaab menu
Waxay umuuqataa mid weyn! Haddii maalin uun ay sii daayaan xirmo luqadeed oo loogu talagalay Linux, Isbaanishka, waan rakibaa 🙂 oo waxaan ka saaraa libreoffice-ka
Waan kuugu raacsanahay. Waxaa intaa dheer, waxaan rajeynayaa in LibreOffice ay hagaajinayso la jaanqaadka dokumentiyada Xafiiska.
Xafiiska Kingsoft wuxuu adeegsadaa qaamuusyada LO.
Maxaad uga jeeddaa adoo adeegsanaya qaamuusyada LO, taas oo ah, suurtagal ma tahay in la soo dejiyo qaamuus si loo saxo qoraalada Isbaanishka ???
Waxaan ku isticmaalaa Android waana wax weyn, laakiin halkaas ayaan ku dhaafayaa, uma maleynayo inaan ku rakibayo PC 🙂
waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu beddeli karo android, xitaa ka fiican kan aan jeclahay xafiiska degdegga ah
In Archlinux waxaad ka heli kartaa AUR sida wpsforlinux, ugu yaraan waxay umuuqataa inay tahay xafiis 2007 clone ah, waxaa la joogi doonaa waqtigii lagu tijaabin lahaa qaab iswaafajin si loo arko sida ay tahay.
Oh way ila egtahay aniga waligay maan jeclayn sida ay umuuqato shaqo furan / libreoffice inkasta oo aanan u maleynayn inaan ku badali doono google docs oo ah kan aan ugu jeclahay hada>.
Runtii waan jecelahay haa, laakiin source isha xiran iyo barnaamijka Shiinaha? WTF !! , kaftan la'aan intaas ayaan u adeegsadaa.
Waxaan horeyba u sameeyay qaab yar waxaanan kuu xaqiijin karaa in Libreoffice ay kafiican tahay tan, qaasatan markay timaado qaab u qaabeynta, xitaa ma furi karto qaababka OOXML, wax Libreoffice ay sameyso. Waxa aan ku raacsanahay ayaa ah in Libreoffice ay tahay inay bedesho muuqaalkeeda, maxaa yeelay waa barnaamij wanaagsan.
HA HA HA HA HA HA HA HA! Isla waxaan iri. Ooh, taa ka tag ...
sida saxda dijo
Shiineyskan, waxay sameystaan ​​nuqullo wax walba….
Dacwada Microsoft ee 3 .. 2 .. 1 ..
Iyagu waa Shiinaha, wax yar ayey qaban karaan! xD
Elav… Ereyga 'Corel Word Perfect' .. Waa inaan in muddo ah xukun haystaa …… Waxaan u maleynayaa inaan si fiican ugu koobiyey xafiiska Office .. http://www.muypymes.com/wp-content/uploads/2012/12/corel-office.png .
Corel maahan shirkad yar.
Corel WordPerfect waa awoowe Microsoft Word. WordPerfect wuxuu caan ku noqday qeybtii labaad ee 80-maadkii, horaantii 90-naadkii, Microsoft Word wuxuu ka fiicnaaday dhanka la jaanqaadka Windows desktop-ka hore. Laga soo bilaabo xilligaas wixii ka dambeeyay, Word iyo inta kale ee xafiiska ayaa la xoojiyay iyada oo loo mahadcelinayo isku xirnaantooda markaa si fiican loo dhisay marka la barbar dhigo ku filnaanshaha hore ee loo yaqaan 'WordPerfect GUI'.
Waxay yihiin Shiine…
Ku jawaab elZorro
Haddii Microsoft ay dacweyso Shiinaha, Shiinaha ayaa u sheegaya, "Hagaag, ka soo qaad Mareykanka." Ama xitaa ka sii fiicnaan lahayd ayaa noqon lahayd haddii ay aad uga xumaadeen inay la wareegaan Mareykanka. Wadar ahaan, waxa Mareykanku ku leeyahay Shiinaha, shaki iigama jiro inay tani aad uga fog tahay xaqiiqda ... xD
Hagaag, isdhexgalka ayaa aniga igufiican, sida aan kor kusoo xusnay waxaan u isticmaalaa android-ga oo way fiicantahay (waxaan dhihi lahaa waa igufilan). hadduu la jaan qaadayo vba waan faraxsanahay !!!!!!
O________O Wax badan igama yaabin, ka dib markii ay dhammaantood yihiin Shiinaha ... XD
Sikastaba waxaan u arkaa inay xiiso ii tahay in dadka Shiinaha iyo dad badaniba ay ku horumaraan GNU / Linux ... Waan badan nahay waana sii badan doonnaa hehehehe .... Codsiga wuu fiicanyahay, inkasta oo aan hada la joogo LibreOffice-kayga foosha xun laakiin awooda badan.
Ku jawaab elwuilmer
Anigu ma rakibo Shiinaha (ama waddan kale oo hanti wadaag ah) ilo xiran ama softiweer software ah !!!
WAA INAAD ka buuxdo Spywares iyo wax ka xun.
Waxaa jira barnaamijyo badan oo software ah oo ay ku jiraan basaasnimo oo xitaa ma ogin, Ubuntu oo ay la socdaan kumbuyuutarrada cusub ayaa sidoo kale sameeya, amazon oo keliya.
Waan ka xumahay cidda isticmaasha ubuntu ka dibna XD.
@Fenix, Ma garanayo haddii aad ogaato, laakiin waxa Ubuntu plugins ay sameeyaan ayaa ah in laga raadiyo Amazon qaab ka dhakhso badan haddii aad u furato biraawsarka qaab dhaqameed, iyo farqiga weyn ee basaasnimada, kuwan waa la go'aansan karaa Haddii aad rabto inaad rakibto ama aadan dhigin, taasi waa, haddii aadan rabin qofna inuu ka helo Amazon inuu helo "qorshahaaga xun ee O inaad adduunka ka adkaato" maxaa yeelay ma ogid meesha ay ku jirto kombuyuutarkaaga, markaa waxaad iska fogeynaysaa muraayadda farxadda leh iyo voila, sixirka ayaa la sameeyay ...
Dhibaatadu waxay tahay in qof kasta oo adeegsada Ubuntu uusan aqoon sida loo nadiifiyo Lens .. waana marka ay wax dhacaan, iyo waxyaabaha loo yaqaan 'Gay Porn' ayaa u muuqda sidii aan dhowaan meel ugu akhriyay ..
Dhab ahaan, waxaa jira labo naga mid ah ...
Hadday ahaan lahayd il furan wax dhibaato ah kuma lahan lahayd rakibideeda hahaha
Waxay iga sii walwal badan tahay inuu Mareykan ka ahaa Shiinaha, runti!
LOL… waa run ... cidina ma garaneyso sida xafiiska Microsoft uu yahay gudaha…. dusha waxaad ka bixinaysaa Microsoft…. oo waxay ku weydiinayaan furaha badeecada, si aad u hubiso inuusan ahayn wax soo saar burcad-badeed ah.
Waxaad ka xaday afkayga ...
Runtu waxay tahay in isbadalka muuqaalka ah ee la midka ahi aanu dhaawici doonin LO, maxaa yeelay "Xafiiska WPS" wuxuu umuuqdaa inuu waqti kuqaato Isbaanishka ...
Waxaan dooran lahaa LO si aan u taageero nidaamka hargaha oo aad u caaryaa, si mid waliba uu ugu dhaqaaqo una bedelo sida uu doono, waan ogahay inay adag tahay, laakiin waxay noqon laheyd ikhtiyaar aad u fiican!
Waxaan aqriyay Giskard wuuna ixasuusiyey kuwa kahadlaya softiweerka bilaashka ah iyagoon ogayn! xD
Dhab ahaan, sida haddii kaliya laga helo waddammada shuuciyadda waxaa jiray basaasiin cofcofcofGooglecofcof.
Maya. Laakiin CIA ma baareyso aniga maxaa yeelay waxaan ahay, farsamo ahaan, dhinacooda. Iyagu waa hanti-goosadyo sidaas oo kale anigu. Sidoo kale waxaan ku noolahay dal "xulufaysi" ah. Anigu ma ihi "cadowgaaga". Laakiin Shiinaha ayaa sababi kara kala duwanaanshaha jira.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, MA ISTICMAALO SODHKA XIRAN SOFTWARE (nooc kasta ha ahaadee), laakiin haddii la i kala doorto mid ka mid ah kii lagu sameeyay Mareykanka iyo mid kale oo Shiinaha ka dhacay (oo aanan haysan wax xulasho ah) waxaan ka dooranayaa midka USA.
Waxaan rajeynayaa in sharraxaaddayda ay kaa dhigtay mid si fiican u fahmay aragtidayda.
Miyay Kuuba Ka Doorbideysaa Adeegsiga Shiinaha? haha waxan ma aanan arkin,
Haha laakiin markaa kaliya maahan wadamada shuuciga ah, iyagu waa kuwa baaraya xusuusnow in wadamadii shuuciga ahaa ay noqdeen shuuciyaal si ay iskaga ilaaliyaan wadamada hantiwadaaga, dagaalladii iyo khilaafyadii hore.
Ma ihi saaxiib Cuba ah. Xaqiiqdii, waxaan u jiraa qiyaastii 2 kun oo km jasiiraddaas.
Sixitaan: qiyaastii 4 kun km.
Taasi waa inay noqotaa Telefoonka Gacanta ee Shiinaha, sax?
Ku jawaab Goanfrimon
Waxaan dhaho mahayo dijo
: qufac: qufac :: ha ii sheegin:
Xaqiiqdii, sirdoonka gringo waxay baaraan xitaa muwaadiniintooda waxaadna dhihi doontaa kuuma baari doonaan sababtoo ah waxaad tihiin waddan xulafo ah hahaha, sidoo kale isp-ka mareykanka ayaa ku basaasi doona si aadan ugala soo degin waxyaabaha burcad-badeedda ka jira shabakadaha p2p haddii aad sameysana waxay kuu jiheyn doonaan inaad aqriso sharciyada ladagaalanka burcad badeeda isla markaana aad si xadidan u xadideyso xawaaraha isku xirka ciqaab ahaan.
Miyaad dhihi doontaa ma adeegsanaysid software furan? Waxaan sheegi doonaa qaar ka mid ah isticmaalka aasaasiga ah. MP3, RAR, FLASH PLAYER ma ka dhawaajinayaan ama aadan isticmaalin?
Wixii ku saabsan softiweerku waa beddel weyn oo loogu talagalay kuwa ka soo guuraya Windows-ka ee u taga Ubuntu ama doonaya beddel bilaash ah ee Windows, si dhakhso leh ayey ula qabsan doonaan, waan jeclahay waana kula talin doonaa!
Haddii aan ka hadlayno basaasnimada, Google Chrome waa boqorka waana mid caan ah, laakiin maadaama la isticmaalay, ma jirto wax la yiraahdo.
Kajawaab Waxba ooma Sheegto
Kuma tiirsanaan laheyn asalka dadka wax dhisa. Marka loo eego habkaaga, waxaan dooran lahaa arjiga aan aad u jeclahay. Geopolitics-ka ku jira software-ka waxba ma rinjiyeeyo (spyware laguma abuurin Shiinaha).
Haddii aad gacanta ku hayso macluumaad xasaasi ah oo khatar gelin kara amniga waddamada hanti-wadaagga ah, ha raacin tusaalahayga. Awoodaha cadawgu waxay kujiraan qulqulatada ;-).
Hari Marar dhif ah dijo
Hagaag, hadday ikhtiyaar i siiyaan, boodhka ayaan ka saari doonaa teebkeygii duugga ahaa.
Ku jawaab Hari dhif
taasi waa mid aad u yankee
Tan kuma dhejinayo xiisaha xiisaha leh, ma doqon baan nahay mise waa maxay?
Maxay qolka xafiisku ugu baahan yahay inuu ku xirnaado internetka MARKA AANAN WEYDIIN?
Tani waxay muujineysaa in cunsurka ugu muhiimsan amniga kombiyuutarka uu hor fadhiyo kumbuyuutarka.
Hahahaha waxay umuuqataa mid fiican, laakiin waxaan hayaa LibreOffice-kayga waan jeclahay waana 100% softiweer bilaash ah, wali ma furo LO si aan u arko is dhexgalka waxaan kaliya u sameeyaa inaan ka shaqeeyo haha ​​😛
mmm yaab, aniga sifiican ayaan u orday, in kastoo hada wax walboo aan u adeegsado calligraph.
Waan jeclahay qolka xafiiskan, wuxuu leeyahay xawaare cajiib ah, sahlanaan adeegsi, adeegsiga kheyraadka oo hooseeya iyo waqtiyada jawaabta ka hor inta aysan libreoffice-ku fiicneyn.
U imanaya imtixaan.
Kububkeyga 12.10 x64 waxaan ku leeyahay LibreOffice 4.0.1 iyo waxyaabaha qaarkood oo aan si fiican u shaqeyn, waxaan isticmaalaa MS Office 2010 oo aan ku rakibey Playonlinux.
TABABAR: Ma fureyso bandhigyada, waraaqaha faafiya gebi ahaanba waqtigooda iyo waxa kaliya ee sida wanaagsan u shaqeeya waa Qoraha ...
Uma jeedo inaan ka dhawaajiyo xukun, laakiin taas cadaabta kuma dhejiyo! Taasi waa inay isku dhafan tahay nooc ka mid ah tikniyoolajiyadda oo xitaa dadka wax walba ku duubta kaamiradana la damiyay ... taxaddar 'haddii ay na duubto xitaa iyadoo kombuyuutarka la deminayo oo ay dhageysanayaan wadahadallada. Oobow!
La jaanqaadida .odt sida ay u qaadato? Tan waxaan u leeyahay maxaa yeelay waxaan ku rakibay android waxba.
By habka, ma jiraa qof ogyahay wax codsi otomaatig xafiis kasta oo loogu talagalay android la jaan qaada .odt iwm? waxa kaliya ee aan helay waxay ahayd aqriste, laakiin suura gal maahan in wax laga beddelo
Waxay umuuqataa mid wanaagsan, laakiin kuweena caadaystay la shaqaynta Libreoffice sidaa uma raaxaysan doonaan. In kasta oo ay tahay war wanaagsan in isku ekaanta isku xirnaanta ay soo jiidan karto dad badan oo adduunka ku jira barnaamijyo bilaash ah oo ugu dambayntiina bilaash ah. Waxyaabaha xun ee aan ku arko WPS waa inaysan taageerin .odt ama .odp 🙁
Waa hagaag, qofna ma garanayaa inta raam ee uu cuno? Sababtoo ah haddii ay dhaafto 300 mb ama xitaa haddii ay dhaafto 200 mb, waxay leedahay basaasnimo, laakiin haddii aysan ahayn barnaamij yar oo sameeya waxa ay leedahay iyo haddii uusan Isbaanish ahayn ma rakibi doono .
Xeerarka Vaio XD-ga.
In kasta oo aan u malaynayo in is-dhexgalkeedu aad u jilicsan yahay, ku dhowaad isku mid ah xafiisyada xafiisyada 2007 iyo 2010.
Waxaa laga yaabaa in haddii is-dhex-galka ay isku mid yihiin laakiin nooca gtk ka badan ama ka fudud laakiin marwalba ixtiraamaya nidaamka jibbaarka, waan rakibi lahaa, mana ahan sababta oo ah Shiinaha; runti waxaan ka aamin badanahay USA marka loo eego Mareykanka.
waan ka xumahay waxaan rabay inaan iraahdo China XD.
Merlin eeg waxa Corel ku sameeyo Corel Word Perfect.
Corel wuxuu ficil ahaan u sameeyaa iyadoo la raacayo shuruudahayga isku xidhka xafiiska 'Office 2010'
Waxay noqon doontaa Shiineys ama wax kastoo ay rabaan, laakiin maadaama ay ku habboon tahay VisualC ++ macros ee miisaska sare ayaan ku rakibay HADDA 😀
Waxaan u sheegayaa inaan isku dayo inaan ka caawiyo bulshada LibreOffice.
Shalay muuqaal ayaa tagay darbiga LibreOffice ee kuyaala Google +, waana daabacay muuqaalkan.
A quilombo ayaa ka qarxay darbiga. Ninku wuxuu weydiisanayay inuu u beddelo adeegsadaha isticmaalaha 'LibreOffice'.
Isticmaalayaasha LibreOffice waxay ugu magac dareen TROLL.
Waxaan u maleynayaa inay tirtireen qoraalkoodii.
Aniga ahaan waa wax fiican inaan arko fikradaha isticmaaleyaasha bulshada GNU / Linux.
Nacalad, maxay tahay isticmaalka aqbalida nidaamka dembiga haddii uusan qofku hagaajin karin, xitaa markaan aqbalno inay na basaaseen oo ay samaystaan ​​nidaam ay gadaal ka iibinayaan iyagoo adeegsanaya qawaaniinta iskaa wax u qabso ee ay sameeyeen boqol qof.
XDon u dhicin, Xafiiska beta ee GNU / LINUX wax kale ma aha oo waa jillaab si aad u sii basaasaan waxa aan ku sameyno adduunka xorta ah ka dibna wax ka fiican adduunka gaarka ah ku sameyno.
Jawaab Juan Carlos Navarro
hagaaji libreffice iintreface oo ku dar
tusaale waxaan helay:
ku waxyooday isku darka: http:http://lh3.ggpht.com/_1QSDkzYY2vc/TEh0OMjuBTI/AAAAAAAABjA/v1ugkEG4IFI/blender-2.53.png
ama ka wanaagsan interface-kan
Ku jawaab alberthdez
Codsi Shiineys ah si loo sameeyo dukumiintiyo si qarsoodi ah ugu xirma internetka iyada oo aan la weydiinin, 'caddaan iyo dhalo'
Waa wax aad u wanaagsan, waxaan u iri maxaa yeelay adoo rakibaya ilaha gaarka ah ee MS WPS waxay furi kartaa dhammaan ereyadayda iyo dukumiintiyada awoodda, maxaa yeelay kan dambe weligiis kuma fiicnayn libreoffice. Waxay dib u soo saartay dhammaan saameynta, iyo lahaanshaha is-dhexgal la yaqaan, dhab ahaantii isku mid, waxaan awooday inaan abuuro pptx aad u fudud oo u muuqday mid gebi ahaanba wanaagsan xafiiska MS, oo ku habboon inaan awood u yeesho inuu adeegsado Linux oo u diro shaqada saaxiib jaamacadeed oo rajeynaya inuu ogyahay in uu jiro windows XP iyo 7
Marka laga hadlayo asalka, hadaan dhahno waa Shiine, waxaan u maleyneynaa inay tayo ahaan liidato, maxaa yeelay kiiskan waxaan u isticmaalay anigoo raadinaya qaladka mana aanan la kulmin wax dhibaato ah ama baraf ama shilal barnaamijka. Uma maleynayo in barnaamijku basaasayo, xitaa haddii uu sameyn lahaa, xaqiiqda saafiga ah ee ku daalacashada barnaamij kasta oo kale ee internetka ayaa sameeya.
Waxay u hartay in lagu nadiifiyo Galbeedka, maadaama ay muujineyso in loo sameeyay dhaqankaas, mar dambe ma arki doonto degelkeeda iyo bogga guriga ee ku xiraya internetka marka loo eego haddii la demin karo, ama xitaa la isticmaali karo gidaar-yare haddii ay dhacdo inaad dareento daawasho.
Waxaan soo qaadaneynaa iswaafaqsanaanta qaabka iyo muuqaalka caanka ah (iyo waxkabatirka) faaiido ahaan, iyo xaddidaadda luuqadda oo ah khasaaro aan rajeynayo in dhaqso loo xallin doono.
Sidee ayaad barkinta uga furi kartaa bogga
Kaliya waxaan ku rakibey kumbuyuutarkeyga laakiin waxaan horeyba ugu isticmaali jiray android, illaa iyo inta aan ka walwalsanahay waa ikhtiyaar wanaagsan maaddaama aan wada ognahay, in kastoo aan haysanno xafiis bilaash ah oo ku yaal GNU / Linux, ma soo bandhigaan isku mid la jaanqaadka dukumiintiyada uu abuuray Microsoft Office, iyo kiiskeyga oo aan gebi ahaanba u beddelay isticmaalka Ubuntu, waxaan haystaa dhibaatooyin markii aan isticmaalayo qaar ka mid ah dukumintiyada .docx iyo .pptx ee LibreOffice.
Ma dhahayo Barnaamijkani waa mid qumman oo wuxuu badali karaa Microsoft, laakiin waxaan qiimeynayaa waxqabadkiisa iyo waqtigiisa Nidaamkan Howlgalka, waxaan qabaa inuu yahay midka ugu dhow.
Anigu ma ihi khabiir isticmaala Ubuntu markaa yaan lagu caayin tan.
Nooc cusub oo ah WPS ama KingSoft oo loogu talagalay Linux ayaa soo baxaya.
Waxaad kala soo bixi kartaa halkan.
Sawirka nooca cusub ee KingSoft Office Beta ee Linux
Waxaan isku dayay noocii ugu dambeeyay ee ay sii daayeen waana mid ku wanaagsan astaamaha cusub waxaadna dooran kartaa luuqada Shiinaha ama Ingriiska, laakiin wali uma badalayo LibreOffice ilaa ay ka sii deynayaan nooc Isbaanish ah haba yaraatee waxba kama badalayo laakiin waa wax iska caadi ah xiiso leh cusbooneysiintan ugu dambeysay ee ay sii daayeen.
Haddii aad isticmaaleyso LibreOffice 4.0.x waxaad isku dayi kartaa astaamaha aan u horumarinayo LibreOffice.
Waad arki kartaa oo aad kala soo bixi kartaa qoraalkan aan sameeyay.
Yuusuf Al dijo
Waxaan qabaa dareeno isku dhaf ah oo ku faraxsan inay uqaadayaan Linux si dhab ah laakiin murugo waxay ilaabi karaan ilo bilaash ah iyo furan
Jawaab Jose Al
Jose Al… Waxaan soo arkay in Elementary OS adeegsadayaashu ay isticmaalaan WPS OFFICE oo ay iska dhaafeen LibreOffice oo ay iska iloobeen maxaa yeelay isku xirkoodu ma ahan mid casri ah.
Boqolkiiba dadka isticmaala yar yar ayaa sidoo kale sidaas u fikiraya.
Waxaan doorbidayaa FreeOffice. Waan jeclaan lahaa inaan bixiyo Suite-kaas.
Sida loo dhigo Isbaanish. mahadsanid
Qeybtii labaad ee Chavez waxay ka tagtay jahli aad uga badan wixii horey uga jiray dunida seddexaad, aqrinta faallooyinka halka ay ku kala soocayaan wax soo saarka asal ahaan aniga ayaa iga xishooday Barta 1, KingSoft maahan shirkad dowladda Shiinaha laga leeyahay. Point 2, MSOficce waxaa soo saaray dad badan (oo ay ku jiraan Shiinaha). Qodobka 3, haddii aan ku haysanno barnaamijkan Isbaanishka waxay ku xirnaan doontaa inta aan dooneyno inaan ku biirino bulsho ahaan. (http://wps-community.org/download/)
Dayactirka iyo cusbooneysiinta golaha